Nutriga က ဆေးဝါးလား...? (ဖြည့်စွက်)ဓာတ်စာလား....? ~ Myanmar Anti Mlm Group
Nutriga က ဆေးဝါးလား...? (ဖြည့်စွက်)ဓာတ်စာလား....?
တကယ် အံ့သြမိပါရဲ့..... 😳
1.Nutriga က ဆေးဝါးလား...? (ဖြည့်စွက်)ဓာတ်စာလား....?
မြန်မာနိုင်ငံ FDA ခွင့်ပြုချက်ရပြီးဆိုပဲ....
ဆေးဝါးဆိုရင်တော့ FDA လက်မှတ်လိုမယ်.....ဓာတ်စာက မလိုပုလို့ သိထားတယ်...ခု ဒီမှာက ဆေးဝါးဆိုပြီးပြောထားတယ်...လုံးဝကောင်းကြောင်း အမျိုးမျိုးဆိုထားတယ်...side effect လုံးဝ မရှိ ဆိုဘဲ....ဆေးဝါးမှန်က S/E နဲနဲမက ရှိရမည် ....
( ဥပမာ...nausea ဆိုတာလောက်ပေါ့)....နောက်ပြီး ထိုင်း FDA ရတဲ့ဆေးဝါးဆိုပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ FDA ခွင့်ပြုချက်လိုသေးတယ်....တကယ်ရရှိပီးသားပဲလား...?
စီးပွားဖြစ်ပီးရောဆိုပီး ကြော်ငြာ်ပြီးရောင်းနေတာတော့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ...အာမခံချက်တွေက လုံးဝကောင်းကျိုးချည်းပဲ....(တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ စာသားလေးကို ပြေးမြင်မိလေရဲ့....#advertising_is_a_form_of_lying 😊).... 😳 😳
Phytovy & Fillymor
Mlm ထုပ်ကုန်များအကြောင်း / Successmore / ပြည်သူ့အမြင်